मेसी भनेका मेसी हुन्, उनीजस्तो अरु कोही छैनः पिएसजीका मालिक अल–खेलाइफि | सबै खेल
मेसी भनेका मेसी हुन्, उनीजस्तो अरु कोही छैनः पिएसजीका मालिक अल–खेलाइफि
फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल ट्रान्सफर समाचार
अर्जेन्टाइन स्टार लियोनल मेसी लिग वानको सर्वाधिक सफल क्लब पीएसजीमा आबद्ध हुने चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यो सिजनको समाप्तीसँगै मेसीको बार्सासँगको सम्झौता सकिएको छ ।
सम्झौता सकिएसँगै मेसीले बार्सा छाडेर पिएसजी जाने चर्चा झन चुलिएको छ । सम्झौता सकिएपनि बार्साले अर्जेन्टिनाका अर्का स्टार स्ट्राइकर अगुएरोलाई आबद्ध गरेपछि भने मेसीले बार्सा छाड्ने सम्भावना कम भएको छ । तर, सम्भावनालाई पूर्ण रुपमा नकार्न भने सकिन्न ।
युरोपियन क्लब फुटबलमा ट्रान्सफरको गरमागरमी सुरु भएसँगै पिएसजीका मालिक नासेर अल–खेलाइफिले मेसी र पिएसजीको ट्रान्सफर रणनीतिका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सबै उत्कृष्ट खेलाडीलाई पिएसजीबाट खेल्ने मन भएको अल–खेलाइफिले दाबी गरेका छन् । उनले मेसीको ट्रान्सफरका बारेमा केही दाबी नगरेपनि उनको खुले प्रशंसा गरे ।
मेसीको ट्रान्सफरका बारेमा के भने ?
मेसीको पुरानो सम्झौता सकिनै लागेको छ र उनले सम्झौता नवीकरण गरिसकेका छैनन् । यसले पिएसजीलाई मात्र होइन मेसीलाई आबद्ध गर्न चाहने हरेक टिमलाई उनीसँग सहमति गरेर अर्को सिजन आफ्नो टिममा भित्र्याउने अधिकार दिएको छ ।
‘मेसी पिएसजी आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषयमा म अहिल्यै केही भन्न सक्दिनँ । सबै उत्कृष्ट खेलाडी पिएसजी आउन चाहन्छन् । हामीसँग पहिल्यैदेखि धेरै उत्कृष्ट खेलाडी छन् । यसै नयाँ खेलाडी थपेको थप्यै गर्न पनि मिल्दैन,’ उने बताए ‘र, मेसी भनेका मेसी हुन् । उनीजस्तो उत्कृष्ट खेलाडी अरु कोही छैन ।‘
कस्तो छ मेसीको आगामी सिजनको समिकरण ?
मेसी अर्को सिजन जुनसुकै क्लबमा गएपनि उनले अहिलेभन्दा कम पारिश्रमिक पाउनेछन् । उनलाई यो सिजन बार्साले दिएजति पारिश्रमिक अर्को सिजन कसैले दिन सक्दैन ।
बार्सा आफैले त झन् दिनै सक्दैन । बार्सा अहिले एक बिलियन यूरोको ऋणमा डुबेको छ । अर्थात्, हाल बार्साको ऋण १ खरब ४१ अरब ७३ करोड ५७ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसैले मेसीले बार्सासँगको आफ्नो सम्झौता नवीकरण गरेको खण्डमा उनले अहिलेभन्दा निकै कम पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ ।
त्यसैले, आर्थिक हिसाबमा हेर्ने हो भने मेसीका लागि पिएसजी जानु नै फाइदाजनक देखिन सक्छ । तर, मेसी अझै दामभन्दा पनि नामकै पछाडी देखिन्छन् । अगुएरोको आगमनसँगै उनी यो सिजन बार्सामै रहेर सन्न्यास लिनु अघि फेरि एकपटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने ध्याउन्नमा छन् ।
पिएसजी र फाइनान्सियल फेयर प्ले
अल-खेलाइफिले युइएफएको फाइनान्सियल फेयर प्ले पोलिसि (एफएफपी) लाई अनावश्यक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । हाल कोभिड-१९ को महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटको समयमा एफएफपी अव्यावहारिक नियम रहेको उनले बताएका छन् ।
‘सबैलाई थाहा छ कि सबै क्लबहरुलाई घाटा लागिरहेको छ । यो महामारीको समयमा एफएफपी निकै वाहियात कुरा हो । यो समयमा विश्व फुटबलले ८ बिलियन डलरको हाराहारीमा घाटा बेहोरिसकेको छ,’ उनले बताए ।
‘एफएफपीले लगानीलाई निषेध गर्नु हुँदैन । हामीले चाहेको के हो ? मान्छेहरुले फुटबलमा लगानी गरुन् कि अरु खेलमा गरेको राम्रो ? मलाई त सबैले फुटबलमा लगानी गरुन् जस्तो लाग्छ,‘ अल-खेलाइफिले भनेका छन् ।
‘त्यसैले एफएफपीका नियमहरु संशोधन हुनुपर्छ । युइएफएले यस बारेमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ,‘ उनले थपे ।
Tags: barcelona, lionel messi, messi to psg, naseer al-khaleifi
भारतका सुनिल क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय गोलमा मेसीभन्दा अघि